Jiri oge ahụ wee mụọ asụsụ site na ngwa ndị a | Gam akporosis
Ngwa kachasị mma iji mụta asụsụ n'asụsụ ndị a kwụrụ iche ugbu a wee were oge ahụ mee ihe
N'ụlọ na oge buru ibu. Betterzọ ka mma iji wee ya uru ịmụta asụsụ site na ekwentị anyị nakwa na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ga-akụziri anyị site na egwuregwu nwere ihe a na-akpọ "gamification."
Anyị ga-egosi gị ngwa kacha mma ga - enyere gị aka mụọ Bekee, French, China na Japanese. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iri ụbọchị ndị a, ọ dị ka ọ gafere ụbọchị iri na ise, egbula ihe nke abụọ n’ịmara ngwa ndị a. Gaa maka ya.
1 Ntuziaka mbụ: jiri nyocha ọchụchọ Google iji chọpụta mkpọpụta
4 Takos na Japan
Ntuziaka mbụ: jiri nyocha ọchụchọ Google iji chọpụta mkpọpụta
Tupu ime ka ị mara ngwa ndị ahụ, anyị ga - enye gị ezigbo ndụmọdụ. Site na igwe nchọta Google ị nwere ike iji aghụghọ a: "Kedu ka ị si ekwu Ndewo na Bekee?".
Nchọgharị ọchụchọ Google gaputa okwu nke okwu ma obu akpaokwu na otú e si akpọ okwu ahụ. A pụkwara iji aghụghọ a mee ihe maka asụsụ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ gbasara etu esi akpọpụta okwu, ị maraworị otu esi eme ya.
Ngwa dị ukwuu nke nọnyeere anyị ruo ọtụtụ afọ. Na-enye anyị ohere ịmụta English, French, Italian, German na Portuguese na nkuzi n'efu nke Duolingo nwere.
Ọ bụ ihe magburu onwe ngwa maka eziokwu nke 'ịmụ egwuregwu' mmụta. Nke ahụ bụ ikwu, ọ ga-enye gị isi ka ị na-aga n’ihu ka ọ dịrị gị mfe ịmụ ụtọ asụsụ French ma ọ bụ ịkpọpụta okwu ụfọdụ na German. Ọ bụ ngwa 100% n'efu nke ga - enyere gị aka ịmikpu onwe gị n'ịmụ asụsụ.
Duolingo – mụta asụsụ
Nke a bụ nnukwu ngwa ịmụta asụsụ ọ bụla. Ma n'ezie ọ nwere ngwa maka asụsụ dị ka Italian, Spanish, German na ọtụtụ ndị ọzọ. Otu ihe dị mkpa nke Babbel bụ na ọ na-enye gị ohere ịnweta isiokwu na mkparịta ụka nke ndụ kwa ụbọchị nke ị ga-esi ruo ụbọchị ahụ ị nwere ike ịchọrọ maka ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ mgbe ị gara mba ọzọ.
Na ngụkọta nwere asụsụ iri na anọ ya na mmekorita nke mmekorita. Igwe nyocha olu a na-eme ka ọ pụta ìhè iji hụ etu ị si akpọ ya na na ọ dị ezigbo mkpa inwe ike ịrụ ọrụ nke ọma na mkparịta ụka gị na ndị ọzọ nwere ike inwe na ndụ gị.
Babbel - Mụta Bekee
Takos na Japan
Ọ bụrụ na nke gị na-amụ Japanese ma ị chọghị itinye spending 4,79 nke ọnụahịa nke ngwa a nwere, ị ga-eche ihu ụzọ kachasị mma iji mụta asụsụ a. Ọ bụghị naanị na ọ ga-akụziri gị asụsụ ahụ n'onwe ya, mana ọ ga-achọpụta n'ụzọ doro anya okwu Japanese dị mgbagwoju anya. The hiragana, katakana na kanji nke kwekọrọ na ọkwa nke Noken 5 nke ule Japanese nke gọọmentị dị ugbu a iji mụta asụsụ a pụrụ iche.
Na mkpokọta i nwere 88 duziri nkuzi, ụdịdị dị iche iche dịka egwuregwu ma ọ bụ ọmụmụ ihe, na minigames ndị ahụ anyị ji laghachi na nke egwuregwu. Just dị nnọọ nwere ịhụ oké nkezi akara ke Play Store ịghọta na a na ngwa bụ ihe karịrị nanị otu ngwa.
Mụọ asụsụ Japanese - Gụọ ma dee
Developer: Egwuregwu Grogshot, SL
Anyị nwere ike inye gị nhọrọ ndị ọzọ, mana Elsa ga-abụ onye ga-edo anya ma melite ihe ọ mụtara. Ọ bụ ụdị onye nkuzi nwere ọgụgụ isi nke nọ ya iji meziwanye mkpọpụta anyị. Yabụ, ọ "ga-ege anyị ntị" ma nyochaa etu esi akpọpụta anyị iji meziwanye ya. Nke a bụ nnukwu ihe kpatara ịbụ na ngwọta a na-enye anyị yana ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma iji soro ndị ọzọ.
ELSA Kwuonụ: Meziwanye ụda olu gị
Developer: ELSA Kwuonụ
Ngwa ọzọ dị ukwuu iji mụta asụsụ na na nke a anyị nwere ọtụtụ ụdị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta asụsụ ahụ iji mụta na ndị ọzọ, ha bụ ngụkọta nke 24 na Rosetta nwere ịmụta asụsụ.
Enwere mesie ike otu esi eme ha ma site na ndenye aha anyị nwere ike ịnweta ịmụ asụsụ ha ọ bụla. O nwere ngalaba maka okwu, ụtọ asụsụ, ịkpọ okwu na mmemme ige ntị yana nke ahụ na-enye anyị ohere ịnweta ihe niile anyị chọrọ iji mụta asụsụ. Ihe ọzọ dị mkpa na nke ahụ na-eme ka ihe siere ndị ọzọ ike.
Rosetta Stone: Mụta Asụsụ - Bekee na French
una usoro nke ngwa iji mụta asụsụ site na ekwentị mkpanaaka gị nakwa na n'ụbọchị ndị a nke na anyị anaghị arụ ọrụ nke ọma, anyị agaghị eleda ya anya. Site n'ụzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ izu ike maka obere oge, ụnyaahụ anyị bipụtara ndị a mindfulness ngwa na-ekwe ka anyị na-anọrọ onwe anyị ma zuru ike na echiche akụkụ na mmetụta uche nke onye anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma iji mụta asụsụ n'asụsụ ndị a kwụrụ iche ugbu a wee were oge ahụ mee ihe
Nokia 5.3 bụ ọkwa gọọmentị: mara ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ a
Egwuregwu kachasị mma n'ịntanetị iji nọrọ ụbọchị ndị a n'ụlọ n'ihi coronavirus ma soro ndị enyi na ezinụlọ egwu